Dhimasho ka dhalatey Gaari Ay Saarnaayeen Dad Shacab Ah Oo Dab Qabsaday | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dhimasho ka dhalatey Gaari Ay Saarnaayeen Dad Shacab Ah Oo Dab Qabsaday
Dhimasho ka dhalatey Gaari Ay Saarnaayeen Dad Shacab Ah Oo Dab Qabsaday
Wararka aan ka heleyno deegaan ka tirsan Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas uu ku gubtay gaari rakaab ah oo ay la socdeen dad shacab ah oo ka baxay Magaalada Muqdisho.
Gaarigaas oo ahaa nooca Soomaalida u taqaano laan-guruusalka ayaa waxaa qabsaday dab xoogan xili uu socdaal ku marayay meel dhow deegaanka Sadax higlo ee Gobalka Mudug, kaasi oo ka baxay Muqdisho kuna sii jeeday Magaalada Gaalkacyo.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay dabkaas qabsaday gaariga ay saarnaayeen dadka, waxaana goobta ku geeriyooday 2 ruux oo kamid ahaa dadkii saarnaa gaariga.
Sidoo kale 5 ruux ayaa dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen dabkaas oo si kedis ah u qabsaday gaariga, isla markaana waxaa dadka dhaawacmay gurmad u sameeyay dad xoolo dhaqato ah oo biyo ku demiya dabka.
Gaadiid kala duwan oo ka baxa Magaalada Muqdisho ayaa si joogta u aada deegaano ka tirsan Gobolada dalka Soomaaliya, kuwaasi oo xiliyada qaarkood uu qabsado dab geysta khasaarooyin kala duwan oo soo gaara dadka saaran gaadiidka.